Unina wengane udinga imali yesibonelelo | News24
Unina wengane udinga imali yesibonelelo
Isithombe: SithunyelweUNksz Thobsile Zondi (kwesokudla) nendodakazi yakhe kwesokunxele.
UNINA wengane eneminyaka engu-11 eyazalwa ikhubazekile uthe sekuphele iminyaka ezama ukuthola isibonelelo sokukhubazeka esiqhamuka kuhulumeni kodwa njalo uma efaka isicelo kwa-SASSA asiphumeleli.
UNksz Thobsile Zondi ohlala e-Imbali Unit 14 uthe inkinga enkulu ngalokhu ukuthi njengoba engasebenzi kunzima ukuthi anakekele ingane yakhe ngokuyithengela izinto ezikhethekile njengoba iphila nokukhubazeka.
“Njalo uma ngifaka isicelo sokuthola isibonelelo sokukhubazeka emahhovisi aseMbilakhahlela bavele bengitshele ukuthi ukukhubazeka kwengane yami kuyinto engalapheka noma bethi akukwazi ukuthi ingane yami ikhubazekile kodwa ibe ingafundi esikoleni sabantu abaphila nokukhubazeka noma bengitshele ukuthi sengijahe ukudla imali,” kusho uNksz Zondi.
Uthe isicelo sokuthola isibonelelo kumnyango usesifaka kwaze kwaba yizikhathi ezine.
Ngokusho kukaNksz Zondi, ingane yakhe yazalwa inokukhubazeka emlenzeni naso nyaweni kanti ngemuva kokuzalwa kwayo ingane odokotela bazama ukuyihlinza ukuze kuzolapheka ukukhubazeka kwayo.
“Kodwa nokuhlinzwa kwayo indodakazi yami akusizanga okwaphoqa ukuthi umuntu azame ukuthi afake isicelo sokuthola isibonelelo sokukhubazeka njengoba umuntu engasebenzi,” kusho yena. Uthe ngenkathi sinqatshwa okuqala isicelo sokuthola lesi sibonelelo abasebenzi bakwa-SASSA abamubuyiselanga incwadi kadokotela eyayifakazela ukuthi ingane yakhe inokukhubazeka.
“Njengoba enenkinga emlenzi nasonyaweni lwakhe akakwazi ukuthi ahambe ngezinyawo uma eya esikoleni okuphoqa ukuthi ngimufake komalume manje inkinga angisebenzi anginayo imali eyanele yokuthi ngimufake kubona, enye into futhi ukuthi izicathulo zakhe ziyashesha ukudleka ziphele ngenxa yendlela anyathela ngayo yingakho ngiyidinga imali yesibonelelo sokukhubazeka ukuze ngizokwazi ukweseka ingane yami ngendlela efanelekile,” kusho uNksz Zondi.
Uphethe ngokuthi imali yesibonelelo ingaphinde imulekelele ngokuthi akwazi ukuthengela ingane yakhe ukudla okunomsoco ngoba kubalulekile kuyona njengoba iphila nokukhubazeka. Incwadi ebhalwe ngudokotela wezingane esibhedlela sase Edendale ebonwe yileli phephandaba iyakufakazela ukuthi indodakazi kaZondi yazalwa inokukhubazeka.
Lencwadi iveza ukuthi indodakazi kaZondi inesimo somgogodla esiyimbangela yokukhubazeka kwayo.
Iqhuba ngokuchaza ukuthi ngenxa yokukhubazeka indodakazi kaZondi ayikwazi ukugqoka izicathulo zesikole ezijwayelekile ezithungwe ngesikhumba.